Alpha GPC ntụ ntụ (28319-77-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Alfa GPC ntụ ntụ
Rating: SKU: 28319-77-9. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Alpha GPC ntụ ntụ (28319-77-9), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Alpha GPC ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka L-Alpha glycerylphosphorylcholine ma ọ bụ choline alfoscerate, bụ ihe okike nootropic nke na-arụ ọrụ ma na ya onwe ya na nchikota ya na ndị ọzọ nootropics. Ọ na-adịkarị na ahụ na obere ma na-ere ahịa dị ka wepụ nke soy lecithin pur.
Alpha GPC ntụ ntụ video
Alpha GPC ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Alpha GPC ntụ ntụ
Usoro Molecular: C8H20NO6P
Molekụla arọ: 257.22
Melt Point: 142.5-143 Celsius
Alpha GPC ntụ ntụ na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ na mgbakwunye okirikiri
Alpha GPC ntụ ntụ, L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate
N'ihe dị n'etiti phospholipid metabolism, Alpha GPC ntụ ntụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ọ bụ site n'ịnapụta ụbụrụ dị mkpa maka ụbụrụ.
Alpha GPC uzuzu nwere ihe omimi nootropic, gụnyere mmelite nchekwa na nchebe site na nká. Nnukwu nsogbu ikpebi nke gụnyere ọtụtụ puku ndị sonyere ya egosila na ọ bụ ọgwụgwọ dị irè maka ncheta ncheta nke metụtara afọ ndị metụtara ọrịa dịgasị iche iche, gụnyere ọrịa Alzheimer, nkwarụ vascular, na ọrịa strok. O nwekwara ikike na-egbochi ịka nká na ọmụmụ ihe na-atụ aro na ọ pụkwara ịba uru n'ịgwọ nchegbu.
O nweghi uru ndi nootropic, tinyere ike ime ka ahuhu aru di ike ma kwalite mmeghari ngwa ngwa mgbe ike gwusiri. Ihe omumu ndi ozo choro na o nwere ike ime dika dopaminergic, na-akwalite nsoputa nke hormone dopamine, nke putara na o nwere ike iburu oria ogwugwu maka oriadegenerative ọnọdụ di ka oria nke Parkinson na nwere ike ibute ihe mmuta nke obi.
Ma maka ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla, ezigbo ike nke Alpha GPC ntụ ntụ dị na njirimara ike ya mgbe ejiri ya na mgbakwunye ndị ọzọ. Mgbakwunye ndị ọzọ nke na-eme ka ụbụrụ gọọmentị GPC na-eme ka ụbụrụ nwee ohere nwere ike ime ka mmelite mmetụ mmụba nke racetams pụta ìhè. O nwekwara ike igbochi obere isi ọwụwa nke na-egbu mgbu bụ otu n'ime mmetụta mmetụta ole na ole metụtara racetam nootropics.
A na-achịkwa ntụ ọka Alpha GPC na Europe, ebe e kenyere ya maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer ma ree ya n'aha aha Gliatilin na Delecit. Na United States, a na-ewere ya dị ka ihe mgbakwunye nri ma dị na-enweghị ndenye ọgwụ.
Ụdị usoro mkpụrụ nke alpha-GPC bụ 300-600 mg, dị ka akara akwụkwọ kachasị. Nkeji a dịka ọmụmụ na-eji alpha-GPC mee ka mmelite nke ike (600 mg) na ọmụmụ abụọ ahụ na-arịwanye elu na-emewanye ihe na-emepụta ọgwụ ọjọọ, ma eleghị anya ọ bụ ọgwụ dị mma maka ndị na-eme egwuregwu.
Maka ojiji nke alpha-GPC n'igosi ihe mgbaàmà nke ịda mbà n'obi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọmụmụ ihe niile na-eji ọgwụ 1,200 mg kwa ụbọchị, nkewawara n'ime 400 mg. Ọ maghị otú obere doses ga-esi baara cognition uru, ma 1,200 mg yiri ka ọ ga-ejikọta ya na uru.
Ihe ọmụmụ ọmụmụ na-egosi na mmetụta nke ọnụ ọgụgụ aghara aghara alpha-GPC na 300-600 mg / kg, nke bụ atụmatụ ụmụ mmadụ nke 48-96 mg / kg (nakwa maka mmadụ 150lb, 3,272-6,545 mg kwa ụbọchị).
Ịdọ aka ná ntị na Alpha GPC ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-eme ka ihe dị mma na-edozi ahụ, ịgbakwunye n'ụdị dị elu nwere ike ime ka mmetụta nke Alpha GPC ntụ ntụ. Otu n'ime ihe ndị na-emepụta ntụ ntụ nke Alpha GPC nkịtị bụ isi ọwụwa ma ọ bụ dizziness, bụ nke na-abụkarị ịmịpụta ụbụrụ na ụbụrụ. Ụfọdụ ndị mmadụ, dị ka "biohacker" a na-ewu ewu, Dave Asprey, kwuru na ha dị elu na choline ma si otú ahụ nweta isi ọwụwa mgbe ha na-etinyekwu ihe.
Mmetụta ndị ọzọ nke Alpha Alpha GPC ntụ ntụ gụnyere ihe dị ka mgbagwoju anya, erythema, na ehighi ura (site na mkpali). Otú ọ dị, n'agbanyeghị ohere nke mmetụta ndị dị na ya, e nwere ihe àmà na-egosi na a naghị egbochi mkparịta ụka a na oke ọgwụ. LD50 (ihe e ji mee ihe iji hụ ụdị dosage na-egbu 50% nke ọnụ ọgụgụ ndị bi) na-egosi dose nke 10k mg / kg (nhata nke 6800 grams maka 150 lb mmadụ) maka oke.
Ihe omumu karia nke oma gosiri "onodu ojoo anya" ya na onu ogugu nke 1636 mg na madu 150 lb.
Ọ bụ ezie na a maara nke ọma dị ka ndị na-adịghị ahụkebe, ụfọdụ ndị na-akọ akụkọ mkpali na mkpụrụ akwụkwọ GPC.
O nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya iji gụpụta mkpụrụ-gPC tinyere nri fatty acids maka nri absorption (n'ihi na ọ bụ phospholipid), ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ọ bụ ihe kacha mkpa.
L-alpha-glycerylphosphorylcholine (mee ka Alpha-GPC na-emekarị, nke a makwaara dị ka choline alphoscerate ma ọ bụ glycerophosphocholine) bụ phospholipid choline na etiti nke lecithin metabolism ma ọ bụ nanị ihe dị na mkpụrụ ndụ lecithin na abuba acids abuo. , ma mara na ọ bụ precursor ka acetylcholine na phosphatidylcholine n'ime ahụ na-eso ingestion.
A na-achọta Alpha-GPC dị ka ihe na-emekarị nke anụ ahụ na-acha anụ uhie na akụkụ anụ ahụ mana maka ọtụtụ akụkụ dị ụkọ na ọnụ ọgụgụ dị mma na isi mmalite ndị na-emepụta ihe. A na-etinye ihe mgbakwunye dị elu nke nwere Alpha-GPC, ebe ọ nwere ike iji enzymatically kee ya ma ọ bụ soy lecithin.N'ihi na okwu a na isi iyi ya, a na-akpọ ya mgbe ụfọdụ dị ka mmịpụta semisynthetic nke lecithin.
Alpha GPC uzuzu nwere ike ime ngwa ngwa na acetylcholine na neurotransmission na ụbụrụ, nke bụ 20-30 nkeji mgbe ọ gụchara ọnụ. Ndị ọrụ nwere ike na-atụ anya ịnweta mmụba n'ọhụụ n'uche, itinye uche na echiche uche n'ime oge a. Iji ya na usoro nri na usoro nlekọta na-edozi ahụ ga-enweta arụmọrụ zuru ezu na mmetụ mmetụ nke mmụba nke Alpha GPC ntụ ntụ n'ime izu 2 mbụ.
Alpha GPC Pụrụ Ntụ
Alpha GPC ntụ ntụ ahịa
Otu esi esi zụta Alpha GPC ntụ ntụ si AASraw
Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ
Coluracetam ntụ ntụ
Lemborexant ntụ ntụ
BD-AcAc2 ntụ ntụ
Sesamin ntụ ntụ
Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ
Fisetin ntụ ntụ
Citicoline sodium ntụ ntụ
Spermidine ntụ ntụ (3)
Mmekọahụ Mmebi Hormones (11)
Ọla abụba (16)
ndị ọzọ na- (69)
11 / 26 / 2017 Mmmmmmmmmmmm2
12 / 17 / 2017 Mmmmmmmmmmmm1
Site na Reddit & Quora: Ajụjụ 12 (arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ) gbasara NMN
08 / 19 / 2021 Mmmmmmmmmmmm
10 / 31 / 2017 Mmmmmmmmmmmm
11 / 05 / 2017 Mmmmmmmmmmmm
Top 7 Ọgwụ Ọjọọ Maka inggwọ Ọrịa Nri Ahụ-FDA kwadoro
07 / 01 / 2021 Mmmmmmmmmmmm
06 / 09 / 2021 Mmmmmmmmmmmm
06 / 01 / 2021 Mmmmmmmmmmmm
05 / 22 / 2021 Mmmmmmmmmmmm